Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Aiza ny mangaraharaha ?
Diso fanantenana indray ireo rehetra nieritreritra fa ho fantatra ny alakamisy teo ny tetiandrom-pifidianana, satria io andron’ny alakamisy io no niara-niseho vahoaka teo anoloan’ny mpanao gazety ny governemanta sy ny Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana (Ceni). Ialana tsiny fa niniana nesorina ny hoe “mahaleotena” ao amin’ilay “Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana” satria tsy manana fahaleovan-tena izany io rafitra iray io. Sady tsy manana fahaleovantena izy eo anoloan’ny fitondram-panjakana no tsy manana fahaleovantena izy eo anatrehan’ireo firenen-dehibe avy any ivelany sy fikambanana iraisampirenena miseho ho sarotiny amin’ny fifidianana mba ho tena ara-pomba demokratika sy eken’ny rehetra, hono!
Tsy mbola nambaran-dry zareo ara-pomba ofisialy àry ny tetiandrom-pifidianana tamin’io alakamisy io. Nomarihin’izy ireo fa “raha ny ara-teknika dia efa vonona fa ny vola hoenti-mihetsika no manalasala”.
Ny filoha lefitry ny Ceni, Thierry Rakotonarivo, moa dia nanamafy fa “40.000 tapitrisa ariary no natokan’ny fitondram-panjakana ao amin’ny teti-bolam-pirenena amin’ity taona 2018 ity hoenti-miatrika ny fifidianana filohampirenena. Ny fianakaviambe iraisampirenena koa, hoy izy, dia efa nanonona fa hitondra hatramin’ny 12 tapitrisa dolara. Mananika ny 36.000 tapitrisa ariary koa ange izany e!
Mbola tsy ampy, hoy izy, ireo satria nisy fitomboana ara-pandaniana nitranga.
Dia ampanjakao aloha ny mangarahara fa tsy hoe “vaomieram-pirenena mahaleotena ianareo dia rariny avokoa ary marina avokoa izay ambaranareo”.
Voalohany indrindra aloha dia isan’ny tsy ananan’ny Ceni fahaleovantena ny fihetsiky ny fiadidiana ny Repoblika satria ahoana moa no inoana fa tsy voavilin’ny avy eny Atsimondrano namonoana afo ny vola voambara fa tokony hikarakarana fifidianana, dia lasa mizaka ny tsy nataony ny Praiminisitra Ntsay Christian. Etsy ankilany, mba afaka mitondra fanampim-panazavana amin’ny antsipirihany momba ny teti-bola tena ilain’ny Ceni ikarakarana fifidianana filohampirenena ve ny tompon’andraikitra ao? Ary manakory sy manao ahoana ny fiantohan’ny volam-panjakana natokana ho an’ny Ceni ny filàn’ireo mpikambana mandrafitra ny Ceni sy ny tombontsoan’izy ireo avy (karama, fiara lafo vidy, tambin-karama, sy ny hafa)?
Ialana tsiny fa volam-bahoaka io ka mahasarotiny raha hihinana ambolony an’izay lazainareo ny vahoaka. Nahoana no tsy ampy ilay 40.000 tapitrisa ariary, ary na ho avy na tsy ilay 12 tapitrisa Dolara, inona avy ireo fitomboan’ny fandaniana voalaza?
Isan’ny mahalasa fisainana mantsy ny fikirakirana volabe toa izany mba hikarakarana fifidianana nefa raha niainga teny anivon’ny fokontany ny fikarakarana an’izany fifidianana izany ka nomena ny anjara-masondroany tamin’io volabe io ny fokontany, dia azo antoka fa tsy ho nandany ny androatokon’io dia vita ny fifidianana.
Aza hadinoina fa ireo mpifaninana hirotsaka hofidiana dia nasaina mandoa vodiondrim-barotra anjatony tapitrisa koa, izay tsy vodiondrim-barotra hotehirizina ao ambata fotsiny fa hampiasaina, hiantohana ny lany amin’ny vatom-pifidianana, raha tsy diso ny fahafantarana ny raharaha. Nanaovana asa-marika mihitsy ny sandan’ny vatom-pifidianana iray mba nahafahana namaritra ny vola tokony ampandoavina ny mpifaninana hirotsaka hofidiana.
Dia nahoana no mbola misy filazana hoe “tsy ampy ireo?” Ampanjakao ny mangarahara fa tsy natao hanabe ny harenan’ny sasany akory ny fikarakarana fifidianana e!
Sao kosa misy finiavana hanemotra ny fifidianana amin’ny taona ho avy any ho any?